တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: မြန်မာနှစ်၁၀၀ ပြက္ခဒိန် MmYear100 (Myanmar Calendar) v.3.0 APK [LATEST version]
မြန်မာနှစ်၁၀၀ ပြက္ခဒိန် MmYear100 (Myanmar Calendar) v.3.0 APK [LATEST version]
ဒီတစ်ခါ အရမ်းလန်းတဲ့ပြက္ခဒိန်ပါ။ မြန်မာ့ပြက္ခဒိန်ပါ။ မြန်မာသက္ကရာဇ်လည်းပါတယ်ဗျ။ ၁၉၀၁ ကနေ ၂၀၁၆ ထိရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ နောက်ထပ် ၃နှစ်အထိရှိတာပေါ့။ Facebook ကသူငယ်ချင်းမွေးနေ့တွေကိုလည်း အဲ့ပြက္ခဒိန်ထဲမှာသိမ်းထားလို့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အေးဆေးပေါ့ဗျ။ အောက်တိုဘာ ၁၈ရက်နေ့ထုတ်ပါဗျ။ ပိုပြီးသိချင်ရင်တော့ http://adf.ly/YJVyB မှာဖတ်ကြည့်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်းဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
- First Android English Myanmar Calendar for 100 years (from 1901 to 2016.)
- Save your friends' birthdays on Calendar
P.S. This program is made to our best knowledge. In case if you found any error/problem (especially 2013 onwards), please contact us at MmCalendar2012@gmail.com or Felix Myanmar Facebook (https://www.facebook.com/FelixMyanmar) to feedback. Thanksalot.
Posted by အောင်မျိုး at 3:33 AM